काठमाडौं उपत्यकामा जेठ २० पछि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौं उपत्यकामा जेठ २० पछि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी
admin May 30, 2021 समाचार Leaveacomment 51 Views
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको आज एक महिना पुगेको छ । जेठ २० गतेसम्म कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था न्यूनीकरण गर्न भन्दै निषेधाज्ञा जारी छ ।निषेधाज्ञा कहिले खुल्छ टुंगो छैन । पछिल्लो एक सातायता उपत्यकामा संक्रमण र मृत्युदर दुवै घट्दो क्रममा छ ।
Previous खुसीको कुरा- नेपालमा कोरोनाले देखायो शुभ सङ्केत, संक्रमित भन्दा निको हुने बढ्दै पुरा पढ्नु होला ?
Next जापानी महिलाहरुकाे छाला राम्रो र गोरो कसरी ? यस्ता छन् उपाय